DHAQALAHA – Somaliland First
Kobaca dhaqaluhu waxuu ka mid yahay rukunada asaasiga u ah horumar waara. Dalna hurmar ma sameeyo, haddii aanu dhaqaalaha dalkiisu kobcin. Dalku marka dhaqaalo fiican yeesho ayuu dadkiisuna shaqooyin fiican, caafimaad, iyo wax barasho helaa, isla markana uu yeesha maal qabeeno hanti haysta. Dalkana waxaa la wada yeelanayaa, marka dhaqaalahiisa ama hantida dalka loo sinado, ee koox gara loo xidhin.
Haddaba, si loo kobciyo dhaqalaha dalka, waa in gudi aqoonyahano ah loo xulo kobcinta dhaqalaha dalka, shaqada gudidani qabanayaan waa in ay noqoto:
Abuurida Baangiga horumarinta Somaliland (ama Somaliland Development Bank). Bangani oo qimayn iyo hirgalin ku sameeya mashruucyada dalka u bahan yahay, kadibna samiyo u qaybiya dadku iibsadan. Mashruucyadani ooy ka mid yihiin: Warshada Sibidhka ee Berbera; Hirgalinta Koranto jaban; Hirgalinta iyo casriyanta Beeraha sida Banka Wajaale, Beer, Xaaxi iyo kuwa kale oo la mida. Hirgalinta warshadaha fudud, sida warshada daqiiqda, baastada; iyo kuwa kale oo la mida; Kaluumaysiga iyo Casriyan dhaqida Xoolaha.